I-DB-G yohlobo lwentsimbi yokuhambisa iBelt yeBeeling Machine yokuCofa
I-DB-G yohlobo lwentsimbi yokuhambisa ibhanti yokuxubha umatshini luhlobo olutsha lwentsimbi yokuhambisa ibhanti yezixhobo zokukhangela eziphandiweyo nezenziwe yinkampani yethu ngokuzimeleyo. Yahlulwe yaziindidi ezimbini: uhlobo oluqhelekileyo kunye nohlobo lokudubula. Kulula ukusebenza, ukusebenza ngokukuko, kunye namandla aphantsi kubasebenzi. Unokuwugqiba umsebenzi wokuxobuka weentlobo ezahlukeneyo zeebhanti zentsimbi yokuhambisa. Sisixhobo esiqhelekileyo esincedisayo kwizintlu ezahlukeneyo zentsimbi yokuhambisa ibhanti yokuhlanganisa, esetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo. Ekhaya eyokuqala kunye nehlabathi ekhokelayo.
Ukwahlula phakathi kwerabha ephezulu yokugquma, irabha esezantsi, irabha engundoqo kunye neentambo zocingo zentsimbi zeebhanti zentsimbi zokuhambisa.
Isanti ebandayo yesamente yerabha yokuhambisa ibhanti yokuncamathela kokuncamathela
I-Antai TM 2020 Cold Bond Cement yamkela itekhnoloji ephezulu yaseJamani kunye nefomula. Yenzelwe ukuba ibe sisamente ekhawulezayo ukuphilisa irabha yokuhambisa ibhanti yokulinganisa kunye nokudibanisa. Kuyinto yokuncamathela efanelekileyo yokusongela ibhanti, ukudibanisa kunye nazo zonke iintlobo zokwenza irabha, nokuba kungaphantsi komhlaba.
Ngelixa usebenzisa i-TM 2020 Cold Bond Cement, ngokubanzi ifuna iinxalenye ezimbini zokugqiba loo msebenzi ngokugqibeleleyo. Kuqala, iqondo lobushushu kwigumbi linyanga i-chloroprene esekwe kukuncamathela kwerabha engamanzi. Okwesibini, xa iconjululwe ngesixa esifanelekileyo se-hardner, ivelisa ukubambelela kwamandla ngaphandle koncedo lokufudumeza, uxinzelelo okanye esinye isixhobo. I-TM 2020 Cement iyakwazi ukudibanisa irabha kwisinyithi, irabha kwirabha, irabha kwi-fiberglass, irabha kwilaphu, kunye nokusongela, ukudibanisa kunye nokulungiswa kwebhanti yokuhambisa irabha. Kananjalo iyakwazi ukufaka isicelo kuninzi lwezinto zerabha ezilungisayo, ezokucoca kunye nezokukrola.
Xa nawuphina umsebenzi ngokubhekisele kwirabha kwisinyithi, irabha kwirabha, irabha kwi-fiberglass, irabha kwilaphu, i-TM 2020 Cold Bond Cement lukhetho olufanelekileyo.